Gudoomiyihi Barlamanaaka Maamulka Puntland Oo Xilkii Laga Qaaday
Thursday November 07, 2019 - 15:48:58 in News by Khadar Bu
Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo) ayaa BBC Somali u sheegay in aysan "sharci ahayn" codkii maanta Baarlamanka ee xilka looga xayuubiyay.
"Waxaanu leenahay nidhaam iyo hannaan; waxaanu leenahay shuruuc uu ugu sarreeyo dastuurka. Haddaanu nahay Baarlamaanka, waxaan leenahay xeer-hoosaadka golaha. haddaanu labadaa midna waafaqsanayn, waa xaaraan, waxna kama jiraan, mana ansaxayo", ayuu yiri Dhoobo.
Xildhibanaada Barlamaanka Puntland ayaa saaka u codeeyay "xilka ka qaadista" Guddoomiyaha Barlamaanka, Cabdixakiin Maxamed Axmed, waxaana xil ka qaadistiisa u codeesay 49 mudane, halka 4 xildhibaanna ay ka aamustay.
Gudoomiye ku xigeenka 1aad ee baarlamanka Puntalnd Abuukaate Cabdicasiis ayaa kudhawaaqay in sidaas xilka looga qaaday gudoomiyihii Baarlamanka Puntland oo aanan ka soo qeybgalin kulankaas xilka looga "xayuubiyay".
Soo jeedinta xil ka qaadista oo "xalay la gudbiyay" waxaa ku saxiixnaa 44 xildhibaan, sida uu sheegay Gudoomiye ku xigeenka Koobaad ee Baarlamaanka Puntland.
Arrimaha ay soo qaateen waxaa ka mid ah sida ay sheegeen in uu yiri guddoomiyaha in "Puntland ay dhisteen oo ay qabsadeen saddex qabiil, arrintaas oo ay shegeen in ay meel ka dhac ku tahay sharciga Puntland".
Sidoo kale xildhibaannada mooshinka gudbiyay waxay ku doodayeen in "gudoomiyaha uu xarunta Barlamanaka geeyay "Maleeshiyaad hubeysan".
Balse Cabdixakiin ayaa beeniyay eedahaas oo dhan wuxuuna yiri: "Ma jirto xeer hoosaad aan jebiyay. Golaheyga si wanaagsan ayuu ku socday, tii shalay u dambeysay si fiican bay u qabsoontay. Gudoonkeygaan la tashanayay oo hareeraha iga fadhiyay, golahaan la tashanayay. Wax la wada qaatay bay ahaayeen".
"Waxaa nakala saaraya; in uu xaq yahay ama in uu xaraan yahay, waxa iigu qoran dastuurka iyo xeer hoosaadka, qaabka aan xilka ku waayi karo", ayuu hadalka sii raaciyay.
"Anigu sifo sharci ah baan ku imid, sifo sharci ahna waan ku tagayaa", ayuu sheegay Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland.
Wuxuu ku andacoonayaa in xildhibaannada "culeys la saaray, lacagna loo qeybiyay", inkastoo taasi aan si madaxbannaan loo xaqiijin karin.
Xarunta Barlamaanka ee Puntalnd waxaa xalay ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ilaalada xarunta iyo ciidamo ka tirsan booliska Puntland, waxaana dagaalkaas ku dhintay saddex qof oo mid kamid ah uu yahay qof rayid halka shan qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
Taliyaha booliska oo la hadlay warbaahinta gudaha ee Puntland ayaa guddoomiyaha barlamaanka ku eedeeyay in uu keensaday ciidamo maleeshiyaad ah, ayna rasaas ku fureen ciidan boolis ah.
Maamul goboleedka Puntland ayaa waxaa maalmahanba laga hadal hayay mooshin la doonayo in xilka lagga qaado guddoomiyaha baarlamanka.
Baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa maalmo kahor diiday in xasaanadda laga qaado xildhibaan Cawil Xasan Daad kadib markii uu su'aalo weydiiyay madaxweyne Siciid Cabdullahi Deni, waxaana xildhibnaada ay si aqlabiyad ah ku meelmariyeen in la laalo dacwaddaasi.
Xildhibaan Cawil Xasan Daad oo BBC la hadlay xiligaas ayaa sheegay in haddii kiis loo haysto ay jirto hanaan loo maro, islamarkana ay ahayd in baaritaan la sameeyo.